Ogow Sababta ay Kaneecadu kuu Jeceshahay!
Author Topic: Ogow Sababta ay Kaneecadu kuu Jeceshahay! (Read 66036 times)
« on: May 21, 2016, 04:51:50 PM »
Sida la ogyahay, kaneecadu qofka iskama qaniinto, waxay qaniintaa kaliya markay u baahan tahay dhiig bini'aadan si ay ugu bacriso ukumaha ay xambaarsan tahay.
Alle wuxuu kaneecada siiyay awood aragti iyo mid urin heer sare ah oo ay ku kala soocato dadka ay u baahan tahay inay dhiiga ka nuugto.
Maxay tahay waxa ay qofka ku doorato?
Waa su'aal aad u muhiim ah oo cilmibaarayaashu ku bixiyeen waqti dheer si ay u ogaadaan sirta ka dambayso arrintaan, way jiraan waxyaabo la ogaaday, laakiin waa arrin weli u baahan in si qoto dheer ah looga sal gaaro.
Hiddaha: Boqolkiiba 85% waxaa mas'uul ka ah genes-keena ama hidda raaceena ama abuursiteena.
Dufanka Kolestaroolka: Dufankaan hadduu ku badan yahay maqaarka waxaa la arkay in kaneecadu ay aad u jeceshahay, laakiin qasab ma ahan in haddii dhiigga laga baaro in kolestaroolkaagu kacsanaado.
Aashitada Uric / Uric Acid: waa walax kale oo jirka soo saaro, qofkii ay ku badan tahay, waxaa la arkay in ay kaneecadu jeceshahay, waana wax ay aad u uriso.
Hawada Carbon-ka: dadka soo saaro hawadaan "carbon dioxide"-ka iyadane aad ayay u jeceshahay inay soo ag dhoobato.
Aashitada Lactic / Lactic Acid: waa maaddo jirka uu soo saaro, dadka qaar ayaa dhididkooda maadadaan aad looga helaa, waxayna ka mid tahay waxyaabaha kaneecad soo jiito.
Nooca dhiigga: Inkastoo dhiig walba ay kaneecadu nuugto laakiin waxaa la arkay inay aad u sii jeceshahay dhiigga nooca "O"
Khamriga: waxaa la arkay in kaneecadu ay jeceshahay in ay cunto dadka caba khamriga nooca "beer-ka" loo yaqaano.
Cudurka: cudurrada qaar qofkii qabo ma cunto kaneecada iyo haddii qofku ay ku badan tahay bakteeriyada qaar oo mas'uul ka ah inay soo saarto walxo laga carfin karo dhididka qofka.
Dharka: waxaa la arkay in kaneecadu ay soo jiidato midabka madawga iyo gaduudka, marka dadka labisan dharka midabadaas leh, kaneecada way soo jiitaan.
Views: 4225 June 05, 2016, 07:59:59 PM
Views: 1869 January 07, 2019, 04:29:56 PM
Views: 280933 December 05, 2018, 08:41:26 PM
Sababta Hooyada in Ilmaha lagu qalo
Started by Hibo jannoBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2231 March 28, 2019, 08:34:12 PM
Su'aal: Kaneecadu ma gudbisaa cagaarshowga?
Views: 1688 December 02, 2018, 11:26:41 PM